ကြယ်တစ်ပွင့်ဆိုတာဘာလဲ: လက္ခဏာများ၊ အမျိုးအစားများနှင့် အရေးပါမှု | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 10/06/2022 10:00 | နက္ခတ္တဗေဒ
နက္ခတ္တဗေဒနဲ့ အပြင်အာကာသအကြောင်း ပြောတဲ့အခါ astro ရဲ့ သဘောတရားကို အမြဲသုံးပါတယ်။ သို့သော် လူတော်တော်များများက ကြယ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ မသိကြဘူး။ နဂါးငွေ့တန်းများတစ်လျှောက်တွင် မတူညီသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စကြာဝဠာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော ကောင်းကင်အရာဝတ္ထုများစွာရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ကြယ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။
ထို့ကြောင့် ဤဆောင်းပါးတွင် ကြယ်တစ်ပွင့်သည် မည်ကဲ့သို့၊ ၎င်း၏ လက္ခဏာများနှင့် အရေးပါပုံတို့ကို သင့်အား ပြောပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
1 ကြယ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
2 ဆိုလာစနစ် ကြယ်များ
နက္ခတ္တဗေဒ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် စကြာဝဠာအတွင်း တည်ရှိနေသော အမျိုးမျိုးသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရာများကို ကြယ်များ သို့မဟုတ် ပို၍ တရားဝင်သော ကောင်းကင်ကိုယ်များ ဟုခေါ်သည်။ အတိအကျပြောရလျှင် ကြယ်များသည် တည်ရှိမှုကို သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာသုံးသပ်မှုနည်းလမ်းများဖြင့် ကောက်ချက်ချခြင်း သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ကောင်းကင်ကိုယ်ထည်များကဲ့သို့သော ကောင်းကင်ကိုယ်ထည်များစွာ တည်ရှိနိုင်သည့် ကောင်းကင်အတန်းအစားတစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဂြိုလ်ကွင်းများ သို့မဟုတ် ကြယ်များ၊ ဂြိုဟ်သိမ်ခါးပတ်၊ မတူညီသောဒြပ်စင်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အာကာသအတွင်း တည်ရှိနေသော ကျွန်ုပ်တို့ဂြိုဟ်၏ အစိတ်အပိုင်းများသည် ရှေးပဝေသဏီကတည်းကပင် လူသားများကို စွဲဆောင်လာခဲ့ပြီး တယ်လီစကုပ်များ၊ အာကာသစူးစမ်းလေ့လာမှုများနှင့် လပေါ်သို့ လူလိုက်ပါသည့် ခရီးစဉ်များပင် ဆက်လက်၍ လေ့လာသိရှိနိုင်ခဲ့သည်။ ဤကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် တည်ရှိနေသော အခြားကမ္ဘာများ၊ ၎င်းတို့ကို လက်ခံကျင်းပပေးသော ဂလက်ဆီများနှင့် အရာခပ်သိမ်းပါဝင်သော အနန္တစကြာဝဠာအကြောင်း သင်ယူနိုင်ပါသည်။
သို့သော် သာမန်ကြည့်မှန်ပြောင်းများ၏ အကူအညီဖြင့်ပင်၊ ရှိပြီးသား ကြယ်အားလုံးကို သာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်ပါဘူး။. အခြားသူများသည် အထူးသိပ္ပံနည်းကျ တူရိယာများပင် လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ တည်ရှိမှုကို ၎င်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အခြားခန္ဓာကိုယ်များအပေါ် ၎င်းတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများမှသာ ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည့်အတိုင်း ဆိုလာစနစ်သည် ဂြိုဟ်များနှင့် အခြားဒြပ်စင်များ ပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်း တိုက်ရိုက်အာကာသဂေဟစနစ်တစ်ခုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏နေပတ်ဝန်းကျင်၏ အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်၏ အမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နေ၏အလယ်ဗဟိုမှ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော အရာဝတ္ထုများ၏ တိမ်တိုက်၏ အပြင်ဘက်အစွန်းအထိ ဖြန့်ကျက်သည်။ Oort Cloud နှင့် Kuiper Belt ဟုလူသိများသည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးဂြိုလ် (Neptune) ၏ နေအဖွဲ့အစည်း၏ အရှည်သည် ကီလိုမီတာ 4.500 ဘီလီယံကျော်ရှိပြီး 30,10 နက္ခတ္တဗေဒ ယူနစ် (AU) နှင့် ညီမျှသည်။
ဆိုလာစနစ်တွင် ကြယ်အမျိုးအစားများစွာ ရှိပြီး၊
နေကြယ် ၁ လုံး
ဂြိုလ် ၈။ မာကျူရီ, သောကြာဂြိုဟ်၊ ကမ္ဘာ၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်၊ ဂျူပီတာ၊ စနေဂြိုဟ်၊ ယူရေးနပ်စ်၊ နက်ပကျွန်း။
လူပုဂြိုလ် ၅ လုံး။ Pluto၊ Ceres၊ Eris၊ Makemake နှင့် Haumea။
ကြယ်များသည် ၎င်းတို့၏ဆွဲငင်အားကြောင့် အက်တမ်များ၏ ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် ထာဝရပေါက်ကွဲခြင်းတွင် တည်ရှိနေသော ဓာတ်ငွေ့နှင့် ပလာစမာပူဖောင်းများဖြစ်သည်။ ပေါက်ကွဲမှုသည် ကြီးမားသော အလင်း၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်နှင့် အရာဝတ္ထုများကဲ့သို့ပင် ပမာဏများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းတွင်ပါရှိသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် ဟီလီယမ်အက်တမ်များကို ပိုမိုလေးလံသောဒြပ်စင်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့်အရာများကဲ့သို့ပင်။
ကြယ်များသည် ၎င်းတို့၏ အရွယ်အစား၊ အက်တမ်ပါဝင်မှုနှင့် အလင်း၏အရောင်ပေါ်မူတည်၍ အမျိုးအစားကွဲပြားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာနှင့် အနီးဆုံးတွင် လူသိများသော ဂြိုဟ်သည် နေဖြစ်ပြီး ညအချိန်တွင် ကောင်းကင်ယံအကွာအဝေးတွင် ကြယ်များကို ကွဲပြားစွာမြင်နိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂလက်ဆီတွင် ကြယ်ပေါင်း 250.000.000 ခန့်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
ဂြိုလ်များသည် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသော လုံးပတ်ရှိသော အရာဝတ္ထုများဖြစ်ပြီး ကြယ်များကို ပေါက်ဖွားစေသော ဓာတ်ငွေ့တစ်မျိုးတည်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော်လည်း အကန့်အသတ်မရှိ ပိုမိုအေးမြကာ ပိုမို ပေါင်းစည်းထားသောကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ ကွဲပြားသည်။ ဓာတ်ငွေ့ဂြိုလ်များ (ဂျူပီတာကဲ့သို့)၊ ကျောက်ဆောင်ဂြိုလ်များ (မာကျူရီကဲ့သို့)၊ ရေခဲသောဂြိုလ်များ (နက်ပကျွန်းကဲ့သို့) နှင့် ကမ္ဘာလည်းရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဂြိုဟ်မှာ ရေအမြောက်အမြား ပါရှိပါတယ်၊ ထို့ကြောင့် အသက်ရှင်သော တစ်ခုတည်းသောဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့၏ အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ ၎င်းတို့ကို လူပုဂြိုလ်များဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်၊ အချို့မှာ သာမန်ဂြိုလ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် သေးငယ်လွန်းသော်လည်း ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားဟု ယူဆရန် ကြီးမားလွန်းပြီး ၎င်းတို့သည် လများဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ သီးခြားတည်ရှိနေပါသည်။ ဘယ်သူ့ဆီကလဲ။
လှည့်ပတ်နေသော ဂြိုလ်များသည် အလားတူ ကြယ်များကို ရှာတွေ့နိုင်သော်လည်း အလွန်သေးငယ်သော အတိုင်းအတာဖြင့် ၎င်းတို့ထဲသို့ ကျသွားခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝဆုတ်မသွားဘဲ နီးကပ်သော ပတ်လမ်းကြောင်းများတွင် ဆွဲငင်အားဖြင့် ထိန်းထားနိုင်သော သေးငယ်သော အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာ၏တစ်ခုတည်းသောလ၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်- လနှင့်အခြားအရေးကြီးသောဂြိုလ်များ၏မြောက်မြားစွာသောကြယ်များ၊ ဂျူပီတာ၏လများသည် ယနေ့တွင် ၇၉ ဝန်းကျင်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။. ဤလများသည် ၎င်းတို့နှင့် တူညီသောဇာစ်မြစ်ရှိနိုင်သည်။ ဆက်စပ်ဂြိုလ်များ သို့မဟုတ် အခြားသော အရင်းအမြစ်များမှ ဆင်းသက်လာနိုင်သည့် ဂြိုဟ်များသည် ၎င်းတို့ကို ပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်း ထိန်းထားနိုင်သော ဆွဲငင်အားဖြင့် ဆွဲငင်နေပါသည်။
ကြယ်တံခွန်များကို အမျိုးမျိုးသော ရွေ့လျားနေသော အရာဝတ္ထုများအဖြစ် လူသိများပြီး မတူညီသော အရင်းအမြစ်များမှ ရေခဲများ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့် ကျောက်တုံးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤကောင်းကင်လွှာများသည် နေကို လှည့်ပတ်၊ ပါရာဘောလစ် သို့မဟုတ် ဟိုက်ပါဘောလစ်ပတ်လမ်းများဖြင့် လှည့်ပတ်နေပြီး ၎င်းတို့သည် ကြယ်နှင့်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ အပူသည် ၎င်းတို့၏ရေခဲထုပ်များကို အရည်ပျော်စေပြီး အလွန်ထူးခြားသောဓာတ်ငွေ့ထွက်ရှိသော "အမြီး" ကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြယ်တံခွန်များသည် ဆိုလာစနစ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည့် ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သော လမ်းကြောင်းများဖြစ်သည့် ကြယ်တံခွန်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ၇၆ နှစ်တိုင်း ဖြစ်ပျက်နေသည့် နာမည်ကျော် Halley ကြယ်တံခွန်။
ကြယ်တံခွန်များ၏ မူလဇစ်မြစ်အတိအကျကို မသိရသေးသော်လည်း ၎င်းတို့သည် နေမှ 100.000 AU ခန့်၊ နေမှ XNUMX AU ခန့်တွင် ဆိုလာစနစ်၏အစွန်းရှိ Oort Cloud သို့မဟုတ် Kuiper Belt ကဲ့သို့သော Trans-Neptunian အုပ်စုများမှ ဆင်းသက်လာနိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။
ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများသည် ဂြိုလ်များ သို့မဟုတ် လများထက် များစွာသေးငယ်သော ပုံသဏ္ဍာန်များ (များသောအားဖြင့် သတ္တု သို့မဟုတ် သတ္တုဒြပ်စင်များ) နှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ပုံသဏ္ဍာန်များစွာရှိသော ကျောက်ဆောင်များဖြစ်သည်။
လေထုမရှိဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ သက်ရှိအများစုသည် အတွင်းဂြိုလ်များနှင့် အပြင်ဘက်ဂြိုလ်များကို ပိုင်းခြားပေးသော အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့် ဂျူပီတာကြားတွင် ကြီးမားသောခါးပတ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သူများတွေအစား၊ ၎င်းတို့သည် အာကာသအတွင်း လှည့်လည်သွားလာကာ ဂြိုလ်ပတ်လမ်းကြောင်းများကို ဖြတ်ကျော်ကာ သို့မဟုတ် ပိုကြီးသော ကြယ်အချို့၏ ဂြိုလ်တုများ ဖြစ်လာကြသည်။
၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း အသေးငယ်ဆုံး အရာဝတ္ထုများကို ပေးသော အမည်၊ အချင်း 50 မီတာထက်နည်းသော်လည်း 100 မိုက်ခရိုမီတာထက်ကြီးသည်။ (ထို့ကြောင့် စကြ၀ဠာအမှုန်အမွှားထက် ကြီးသည်)။
၎င်းတို့သည် ဂြိုလ်၏ဆွဲငင်အားဖြင့် ဆွဲငင်ကာ လေထုထဲသို့ ဆွဲဆန့်ကာ ဥက္ကာခဲများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသော ကြယ်တံခွန်များနှင့် ဂြိုဟ်သိမ်များ၏ အပိုင်းအစများ ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်သောအခါ၊ လေထုနှင့် ပွတ်တိုက်မှု၏ အပူသည် ၎င်းတို့ကို အပူပေးပြီး ၎င်းတို့ကို လုံးဝ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ အငွေ့ပြန်စေသည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင် ဥက္ကာပျံအပိုင်းအစများသည် ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ကို ထိမှန်သည်။
Nebulae သည် ဓာတ်ငွေ့အစုအဝေးဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် ဟီလီယမ်တို့နှင့်အတူ စကြ၀ဠာဖုန်မှုန့်များနှင့် အခြားဒြပ်စင်များနှင့်အတူ အာကာသအတွင်း ပြန့်ကျဲနေသော၊ ဆွဲငင်အားအရ နေရာယူမှု အနည်းအကျဉ်းဖြစ်သည်။ တခါတရံတွင် ကြယ်အသစ်များကို ဖန်တီးကာ ဤကြယ်ပစ္စည်းအားလုံးကို စတင်ချုံ့နိုင်လောက်အောင် ပြင်းထန်သည်။
တစ်ဖန် ဤဓာတ်ငွေ့အစုအဝေးများသည် ဆူပါနိုဗာကဲ့သို့သော ကြယ်များကို ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ငယ်ရွယ်သောကြယ်များဖန်တီးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှ ကျန်ကြွင်းသောအရာများ စုဆောင်းခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာနှင့် အနီးဆုံး နက်ဗျူလာမှာ နေမှ အလင်းနှစ် 650 ရှိသော Helix Nebula ဖြစ်သည်။
ကြယ်အစုအဝေးတစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆိုလာစနစ်၊ နက်ဗျူလာ၊ စကြ၀ဠာဖုန်မှုန့်များ၊ ကြယ်တံခွန်များ၊ ဂြိုဟ်သိမ်ခါးပတ်များနှင့် အခြားသော ကောင်းကင်အရာဝတ္ထုများနှင့်အတူ၊ galaxies ဟုခေါ်သော ကြီးမားသော ယူနစ်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းသည့် ကြယ်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ လူပုဂလက်ဆီများ (ကြယ် 107 လုံး) သို့မဟုတ် ဧရာမနဂါးငွေ့တန်းများ (ကြယ် 1014 လုံး) အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြောနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ကို ခရုပတ်၊ ဘဲဥပုံ၊ lenticular နှင့် irregular ဟူ၍လည်း ခွဲခြားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေအဖွဲ့အစည်းတည်ရှိရာ နဂါးငွေ့တန်းသည် ရှေးဂရိယဉ်ကျေးမှု၏နတ်ဘုရားမ Hera ၏မိခင်နို့ကိုအစွဲပြု၍ နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီဖြစ်သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် ကြယ်တစ်ပွင့်သည် မည်ကဲ့သို့၊ ၎င်း၏လက္ခဏာများနှင့် အရေးပါမှုတို့ကို ပိုမိုသိရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » နက္ခတ္တဗေဒ » ကြယ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
ပလူတိုဟာ ဘာကြောင့် ဂြိုဟ်မဟုတ်တာလဲ။